Keylor Navas oo la xaqiijiyay inuu u baahanyahay qaliin si uu dhaqso ugu soo laabto garoomada – Gool FM
Keylor Navas oo la xaqiijiyay inuu u baahanyahay qaliin si uu dhaqso ugu soo laabto garoomada
(Madrid) 02 Juunyo 2016 Goolhayaha Real Madrid iyo xulka qaranka Costa Rica Keylor Navas ayaa la xaqiijiyay inuu u baahanyahay qaliin dag dag ah si uu uga soo kabsado dhaawaca soo gaaray.
Navas ayaa la xaqiijiyay maalmo ka hor inuu seegi doono Copa America kadib markii uu ku dhaawacmay Final-kii Champions League ee sabtigii hore.
Dhaqtarka xulka qaranka Costa Rica ayaa kula dardaarmay Real Madrid in Keylor Navas uu u baahanyahay qaliin haddii kale xaaladiisu ay sii liidan doonto maadama dhaawaca haatan uu la dhibtoonayo uu yahay mid ka soo gaaray koobkii aduunka ee 2014.
“Waxaa la xaqiijiyay in dhaawucu uu intaan ka sii xumaan karo, sidaas darteed xiriirku wuxuu kula dardaarmay Real Madrid in xalka ugu fiican uu yahay in lagu sameeyo qaliin” ayuu yiri dhaqtarka xulka qaranka Costa Rica.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Keylor Navas uu isbuuca soo socda qaliin ku mari doono dalka Holland isaga oo diyaar noqon doona bilowga xiliciyaareedka cusub.
WARBIXIN: Real Madrid oo suuqa dhigtay James Rodriguez
Mourinho oo isaga baxay kulan tabaruc ah oo uu koox ka qeyb galeysa tababare Old Trafford ugu noqon lahaa